Olee otú nkwado ndabere na mpaghara weghachite Blackberry SMS
Ichekwa ndabere SMS dị mkpa n'ihi na ụfọdụ ndị ọrụ ka ha na-na SMS maka ọdịnihu nzube ma ọ bụ dị ka akwụkwọ. N'ihi na Blackberry ọrụ, e nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche ka ndabere gị Blackberry SMS. Otu n'ime ụzọ bụ site na iji na-ewu ewu Blackberry desktọọpụ software, ọzọ usoro bụ site na iji Blackberry SMS Back Up ngwa n'ihi na Blackberry.
Na nkwado ma weghachite Blackberry SMS na Blackberry Desktọpụ Software
Nzọụkwụ 1: Download na wụnye Blackberry Desktọpụ Software si http://global.BlackBerry.com/en/software/desktop.html.
Nzọụkwụ 2: Gbaa blackberry Desktọpụ software na jikọọ na gị Blackberry ekwentị.
Nzọụkwụ 3: Pịa na Back ugbu a ka ndabere gị data. A mmapụta elu igbe ga-apụta na nkwado ndabere na mpaghara nhọrọ.
Nzọụkwụ 4: Pịa na "Custom (họrọ data naanị)" na họrọ data ahụ bụ SMS wee pịa na Back elu button ndabere.
Nzọụkwụ na Weghachi ndabere SMS
Nzọụkwụ 1: Jikọọ gị Blackberry ngwaọrụ gị na kọmputa na pịa na akụ ọzọ na Ngwaọrụ na elu aka ekpe n'akụkụ nke software na họrọ Weghachi.
Nzọụkwụ 2: Họrọ ndabere na ị chọrọ iji weghachi si na họrọ "họrọ ngwaọrụ data na ntọala" ma pịgharịa gaa na ala iji họrọ SMS.
Nzọụkwụ 3: Pịa na weghachi. A ịdọ aka ná ntị ga-gbapụta, dị nnọọ pịa ee na-eche maka SMS a ga-eweghachi.
Iji weghachite Blackberry ndabere na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Wondershare Mobiletrans bụ ngwa na-akwado 1-Pịa transfer site na otu ekwentị / ndabere faịlụ gaa na ekwentị ọzọ. Ọ na-akwado na-agụ Blackberry ndabere faịlụ na kwa ngwaọrụ dị ka iPhone, gam akporo ngwaọrụ, na Nokia Symbian igwe. Ọ na-akwado transfer n'etiti niile nyiwe dị. Uru:
Nyefee blackberry ndabere faịlụ, itunes / iCloud ndabere faịlụ, wdg na ngwaọrụ ndị ọzọ
Nyefee data si dị iche iche nyiwe. Nyefee si iPhone ka Android na Anglịkan
Fast transfer n'etiti ngwaọrụ
Gị data bụ 100% enem na MobileTrans
Na-akwado na nkwado ma weghachite n'etiti dị iche iche nyiwe
Olee otú iji Wondershare MobileTrans
Nzọụkwụ 1: Pịa Download bọtịnụ n'okpuru ibudata na ịwụnye Wondershare Mobiletrans na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2: Malite MobileTrans software na họrọ Weghachi si Backups mode.
Nzọụkwụ 3: Kaa ihe ị chọrọ nyefee na see mmalite oyiri button nyefee n'etiti igwe. Ekwentị na nri bụ ekwentị na-anata data.
MobileTrans Ohere ọrụ iji weghachi ha na kọntaktị na SMS si Blackberry ndabere na ngwaọrụ ndị ọzọ na iche iche nyiwe. Ọrụ ndị na-a ọhụrụ na ekwentị na chọrọ nyefee ha SMS na kọntaktị ha ọhụrụ ekwentị ha blackberry nwere ike iji Wondershare MobileTrans ngwa nyefee ha SMS na kọntaktị na nanị otu-pịa enweghị edegharị kọntaktị ma ọ bụ SMS otu mgbe ndị ọzọ.
Na nkwado ma weghachite Blackberry SMS na SMS ndabere ngwa
1. ndabere na SMS ndabere ngwa
Nzọụkwụ 1: Download na wụnye blackberry SMS ndabere ngwa gị Blackberry ngwaọrụ site na Blackberry Store ma ọ bụ nanị gaa https://appworld.BlackBerry.com/webstore/content/98984/?countrycode=US&countrycode=MU&lang=en iji nweta ya.
Nzọụkwụ 2: Kpatụ menu nhọrọ na n'elu ekpe gị Blackberry ihuenyo ele nhọrọ.
Nzọụkwụ 3: Enweta na ndabere ka ndabere gị SMS.
Nzọụkwụ 4: Họrọ SMS nhọrọ na nyochaa XML ndabere faịlụ. Ugbu a pịa Mepụta ndabere na ala nke gị na ihuenyo.
2. Weghachi na SMS ndabere ngwa
Nzọụkwụ 1: Kpatụ menu nhọrọ na n'elu ekpe gị Blackberry ihuenyo ele nhọrọ.
Nzọụkwụ 2: Enweta na Weghachi nhọrọ iweghachi gị SMS.
Nzọụkwụ 3: Họrọ weghachi SMS / MMS na pịa na nhọrọ Weghachi ndabere na ala nke ihuenyo iji malite usoro.
Ọzọ mere iji Wondershare Mobiletrans
Ndị kasị, kacha na kasị dịrị nchebe ụzọ nyefee SMS na kọntaktị gị Blackberry ngwaọrụ bụ site MobileTrans ngwa. The ngwa na-agụ blackberry ndabere faịlụ site blackberry Desktọpụ Software na-enyefe ya na gị na ngwaọrụ ọhụrụ.
N'adịghị ka ndị free ngwaọrụ si n'ebe, MobileTrans na-enye gị na-akparaghị ókè ike uzo mgbochi na ngwaọrụ gị na-eme ka data transfer, ndabere, weghachi na ọtụtụ ihe ọzọ mfe na ngwa ngwa.
Weghachi gị iPhone data na gị android ngwaọrụ ma ọ bụ gị Android ekwentị data na gị iPhone.
A click-eme anwansi. Ị na-adịghị na-aga site wizards ma ọ bụ na-enweghị isi usoro mgbe ebufe data. Dị nnọọ pịa "Malite Copy" button na ihe niile ga-eme maka gị.
MobileTrans-Eme gị data emebibeghị mgbe enyefe enweghị adịkwa ma ọ bụ na-emerụ emerụ faịlụ.
> Resource> Naghachi> Olee otú ndabere na weghachite Blackberry SMS